Oct 14, 2009 Jwxo, Jwxo-shiil, Jwxo-shiilada, Jwxo-shiilo
Kibistii go,daygii kol haduu kala tuuray kumbiskaynu sugaynay iyo shaahi noo karsamaayey, kaca oo dila mooyee kalmad aynu nidhaahno car miyeynu kasnaa, ku kalooynu yagleelo waxba soo kordhin maayo ku kalaa kufindoona, ma kadeedbaan ku jiraa kuligeed nolosheena!
Wax kasta oo aduunk akorkiisa Eebe weyne keenay ama ay kasbeen Aadanuhu waxaa uu lee yahay xili [life time], ka dibna waa uu qarsoomaa. Aadanuhu waxaa uu ka mid yahay waxyaabaha Eebahay uu aduunka ku qurxiyey ee ugu qiimaha badan, aadanuhu inta uu aduunka joogo si gaar iyo si guudba waxaa uu la yimaadaa waxayaabo badan oo faa,iido iyo khasaareba leh.
Qaar ka mid ah dadka ayaa waxaa uu Eebahay ku Alhuumeeyaa in ay la yimaadaan aragtiyo faa,iido u leh dadka, dadkaas qaarkood waxaa ay helaan xili ay kaga gun gaadhaan aragtiyada ay la yimaadeen, qaarkoodna waxay dhintaan iyaga oo aan dhamaystirin fikirkood.
Fikirada iyaga oo aan dhamaystirmin ay dhintaan dadkii waday labo mid umbay noqdaan; kuwo halkaas ku baaba,a ama kuwo ay dad kale sii ambaqaadaan, ka gadaala ay ka faa,iidaan ummada loo horumariyey fikirkaas.
Waxaan uga gol lee yahay oo ummada Somalida Ogadeeniya ka khusaysa, waa halganka kaca hadana kufa kolkuu muddo jiraba. Kaan uga dan lee yahay waa halganka aan ku barbaaray ee ay horseedka ka ahay Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeeniya [Jwxo] oo jilba jabsaday xiligii uu johorada la soo bixi lahaa.
Shaki kuma jiro in uu maray wadadii ay mari jireen kuwii ka horeeyey iyo waliba hanaan la mid ah wixii burburiyey. Dadku kolka ay wax ka didaan dib looguma karo inta ay muddo ka soo wareegayso, haatan waxaa dadweynaha Somalida Ogadeeniya u soo uraya halgankii ay waday Jwxo, marka laga reebo kuwa sababay in la naco Jwxo oo ay ugu horeeyaan Jwxo-shiilo [qabiil ku jabhad]. Jwxo-shiil oo ah abnooska ugu weyn ee adimo jaray ururka ONLF, ayaa haatan ku Ooyaya eedayey maxaan waxaan falay u falay, waayo waxaa ay noqon weyday wixii uu istusay kolkii uu ahaa horjoogaha halganka.
Jwxo-shiil, oo kolkii hore ku jiray gorgortan ah sidii uu u hanan lahaa awooda ururka ONLF, si uu heshiis ula gaadho xukuumada Itobiya ayaa waxaa uu dhagta dhiiga u daray kuwii lahaa fikirka abuuranka iyo hogaaminta ururka ONLF. Kolkii uu sameeyey arinkaas waxaa uga baxay balan qaadkii xukuumada Itobiya oo ogg in xitaa hadii aan waxba lagu samayn in ayna jirin wax uu samayn karo Jwxo-shiil.
Waxaana socda tabcadii ay adeegsatay xukuumada Itobiya, dadkii ururka wadi jiray Jwxo-shiil ayey xukuumada Itobiya u adeegsatay, kolkii uu dilayna xukuumada Itobiya balankii laysku oggaa waxay tidhi dabaday ka banaanka.
Ummada Somalida Ogadeeniya meesha ay maanta taalna waxaa dhigay Jwxo-shiil, fikirka in horumar lagu sameeyo [development research] afrika ma taqaan, ummada Somalida Ogadeeniyana waa la mid waxaana muddo ka dib la abuuridoonaa fikir cusub [new research].